Ahoana no fomba ahazoako mifandray amin'ny VPN ny iphone-ko? - Faq
Tena > Faq > Ampifandraiso ny vpn automatique - ahoana no fomba hipetrahana
Ampifandraiso ny vpn automatique - ahoana no fomba hipetrahana
Ahoana no fomba ahazoako mifandray amin'ny VPN ny iphone-ko?
Fomba iray hahazoana antoka fa nyiosFitaovanamampifandray ny fiaraho an'nyVPNdia nyTadiavo'Mampifandrayamin'ny fangatahana ”ao anatin'ny anaoiOS VPNFikirana, amin'ny alàlan'ny fandehanana any amin'ny General>VPN> Fandraisana Internet tsy miankina. Safidio ny kisary 'i' manga eo akaikin'ny 'Internet Access tsy miankina' ary avy eo no ahitanao ny safidyMampifandraymisy mila.6 martsa 2018
- Misy fomba telo lehibe ahafahanao manangana VPN amin'ny iPhone-nao; amin'ny tanana, amin'ny alàlan'ny fampiharana, ary amin'ny alàlan'ny browser.
Ato amin'ity lahatsoratra ity, tsy hoe handeha hamakivaky anao amin'ny fomba fanaovana azy fotsiny aho, fa hilaza aminao koa ny mahatsara sy maharatsy ny tsirairay Manazava ny fomba fiasa. Tongasoa eto amin'ny 'zava-drehetra azo antoka'
Ahoana no hanereko ny fifandraisana VPN Windows 10?
Mampifandraymankany aVPNamin'nyWindows 10
Safidio ny bokotra Start, avy eo safidio ny Settings> Network & Internet>VPN> Ampio aFifandraisana VPN.
Ao amin'ny Add aFifandraisana VPN, ataovy izao: ...
Safidio ny Save.
Raha mila manitsy nyFifandraisana VPNfampahalalana na farito ny toe-javatra fanampiny, toy ny fikirana proxy, safidio nyFifandraisana VPNary avy eo mifidiana Safidy mandroso.
- Androany hijery ny router Internet anao izahay.
Amin'ny fomba manokana, hasehoko anao ny fomba fametrahana VPN amin'ny router tsy misy tariby ary hampiasako azy hampifandray ireo fitaovana rehetra ao amin'ny tambajotrao. Mandehana mamaky ny fikirana amin'ity router vao novidiko ity, Asus RT-AC66U. Fa na dia tsy manana ny router mitovy aminy aza ianao dia aza manindry, mampanantena aho fa mbola afaka manaraka ahy ny All Things Secure. Josh no anarako ary izaho manokana dia mitantana VPN amin'ireo mpandeha amiko hahafahako mampiasa ny Apple TV ary ny fitaovana iray hafa ao an-trano nefa tsy mametraka apps na manahy momba ny fetran'ny fifandraisana miaraka.
spinrite usb usb
Mba hahatonga ity fampianarana ity ho mahasoa araka izay azo atao, dia hanomboka amin'izay antenaina safidy tsotra indrindra isika ary avy eo hiasa amin'ny alàlan'ny safidy hafa. Ary, alohan'ny hidirantsika ato amin'ity router ity dia heveriko fa efa nanangana mpizara VPN anao manokana ianao, na manana famandrihana serivisy serivisy VPN ianao dia hampiasa ExpressV PN ho ohatra eto, na dia misy aza serivisy, izay efa nanoratanao asa. Raha mila mividy VPN ianao dia afaka mankanesa any VPNsetupguide.com, rohy mpiara-miasa izay hitondra anao mankany amin'ny pejy fandraisana ExpressVPN.
OK, avelao aho hanomboka amin'ny vaovao ratsy. Raha ny router ampiasainao no nomen'ny orinasanao Internet na tariby anao ho isan'ny fonosana Internet anao, mety tsy afaka manangana VPN ianao eto, amin'izay dia mila mividy router an'ny antoko fahatelo ianao toy ireo nataon'i Asus, Netgear, na Linksys misy ihany. Nampidiriko ny rohy mankany amin'ireo mpamily sasany izay atoratako amin'ny famaritana etsy ambany, na ho anao izay tsy te handalina azy io, raha mankany Allthingssecured.com/flashrouters ianao dia afaka mividy router WiFi amin'ny vitsivitsy monja tsindrio, izay tsy mila fametrahana ary azo havoaka avy hatrany anaty boaty miaraka amin'ny serivisy VPN ankafizinao no fomba mora indrindra hampiasa VPN amin'ny router.
Raha mety aminao io dia mankanesa any amin'ny url ary safidio ny router tianao. Ho anao sisa izay efa manana router, ny zavatra voalohany tokony hataonao dia ny mahita ny sticker amin'ny router izay milaza aminao ny fomba fidirana ho mpitantana etsy ambany na ao ambadiky ny router, ary ity no ianao dia ho hitako eo amin'ny router-ko taloha, manome anao admin sy teny miafinao amin'ny sticker apetakao hitanao eto, aza gaga raha toa ka andian-tarehimarika, ny mahazatra indrindra dia ny 198.168.1.1.
Na izany na tsy izany, alao antoka fa mifandray amin'ity router tsy misy tariby ity ny solo-sainanao alohan'ny hanombohanao hahafahanao miditra. Tonga eto amin'ny solosaina mifandray amin'ny router Asus-ko aho, na amin'ny alàlan'ny WiFi na tariby ethernet, eo am-panaovana ity fanamboarana ity. Nanokatra ny tranokalaniko Internet aho, mampiasa Firefox aho.
mividy mpanaraka xbox
Azonao atao ny mampiasa Chrome, Edge, Safari, na inona na inona browser Internet tadiavinao, miankina aminao manokana izany, fa eto amin'ny bara adiresy, midira ny adiresy IP an'ny router izay 198.16. mety ho 8.1.1, ity no mahazatra indrindra na adiresy url araka ny nahitanao azy tao ambadiky ny router Asus-ko, ny Router.Asus.com dia hanangana kaonty toa an'ity ianao na hampiditra ny mari-pahaizana azonao. hita eo ambadika na amin'ny sisin'ny router-nao.
Tsara, izao dia tafiditra ao amin'ny tontonana admin an'ny mpandahatra ny router anao izahay, toa izao no hita. Mety ho hafa ianao, ary tsy maninona. Manantena izy ireo fa ny router-nao dia manana fampiasa VPN namboarina.
Ary midika izany fa napetraka izy io mba hanaiky ny fanaingoana VPN. Ary mazàna rehefa misy izany dia azonao atao ny mahita takelaka VPN eto amin'ity ilany havia ity toa ahy eto. Indraindray eo amboniny.
fanaraha-maso faharoa nivaingana
Indraindray dia miafina ao ambadiky ny kiheba 'Security', fa inona no tadiavinao amin'ity fiasa VPN ity. Ary raha tsy manana ireo ianao, dia horesahinay izay tokony hataonao manaraka, fa ndao alao mody ataonao kely fotsiny dia mitady client VPN izahay. Ankehitriny ianao dia hanampy profil.
Ireo mombamomba ireo dia ho mpizara samihafa izay hidiranao. Ary rehefa mampiasa ExpressVPN toa ny fampiasako azy dieny izao aho, ary rehefa miditra ianao, dia hisy pejy fananganana. Izao dia mety ho an'ny mpizara na serivisy ampiasainao, na NordVPN, Surfshock, ExpressVPN, IPVanish, na ny iray amin'izy ireo, dia pejy fananganana izany ary raha mikorisa ambany ianao dia tadiavo ny fanamafisana ny tanana.
Tsapako fa misy ny safidin'ny router eto, fa matokia ahy, te-hijery ny fikirakirana manual hanome anao ny serivisy betsaka indrindra ianao. Ny sasany tsy manao, fa ny ankamaroan'ny serivisy dia manome anao ny safidy OpenVPN sy ny fifandraisana PPTP. Ny maha samy hafa azy dia ny OpenVPN dia somary azo antoka kokoa raha toa ny PPTP haingana kokoa ny misintona, raha mandefa atiny, lalao na zavatra hafa toa izany ianao, mety te-hametraka fifandraisana PPTP eto aho ary izany no hasehonay anao .
Ka raha tsindrio io PPTP io aho ary andao hatao hoe te hifandray amin'i New York aho dia handika ny adiresy any amin'i Das ary handeha aho ary hiteny amin'ilay famaritana fa ity ny ExpressVPN New York ary apetaho avy eo adiresy mpizara. Ary avy eo dia hiditra aho ary handika ary hametaka ny anarako sy ny teny miafiko. Tonga lafatra, avelantsika eo amin'ny Auto ity ary tsindrio OK.
Ankehitriny dia natsangako ity mombamomba ity ho an'ny mpizara New York miaraka amin'ny PPTP ary raha tiako izany dia tsindrio fotsiny ny Activate. Haharitra segondra vitsy, fa ho hitanao eo ankavia ity marika fanamarinana ity, izay manondro fa mifandray amin'ny VPN aho amin'ny alalàn'ny router-ko ary misy fitaovana mifandraika amin'io router io ihany koa no mampiasa ny encryption mitovy amin'ity VPN- Server namboarina fa tombony miharihary amin'ny fampiasana VPN amin'ny router-nao. Tonga lafatra, ankehitriny mifandray isika.
Andao hatsahatra io fifandraisana io ary manangana Ope nVPN satria ny manampy ny fifandraisana OpenVPN dia hafa kely. Raha izany dia miverena amin'ny ExpressVPN, kitiho ny OpenVPN, ary andao hanao ny Chicago. Ka hamorona rakitra any Chicago aho, ary ny hitranga amin'ny ankamaroan'ny serivisy dia hanome anao rakitra izay ampidininao izy ireo, rakitra .ovpn io.
Noho izany dia alainao ity rakitra ity. Ary avy eo dia mila mandika sy mametaka ny solonanarana isika. Ka hampiasaiko aho ary hilaza fa ity dia ExpressVPN Chicago.
Ny mpizara VPN, azafady, mandehana any amin'ny OpenVPN. ExpressVPN Chicago, apetaho ity solonanarana ity, apetaho ny kaody farany, ary avy eo dia mila miditra aho ary mitady ilay rakitra nakariko, avy eo ampakatra izany rakitra izany, ary izany rehetra izany dia hanafatra ny OpenVPN fikirana tokony hananana azy amin'izay ianao tsy mila manahy momba ny fikirakirana tanana izany rehetra izany. Raha vantany vao vita ny upload, kitiho OK.
mpamily tsy misy tariby
Ary izao dia nanangana ny mpizara OpenVPN izahay ary tonga amin'ny Activate indray, miandry iray minitra, ary raha vao hitanao ilay marika manamarina fa mifamatotra dia tsara ny mandeha na ny mandeha. Lavorary, mifandray isika. Ankehitriny, amin'ny fampiasana Asus na dashboard backend router maromaro hafa, azonao atao ny manangana mpizara isan-karazany mora foana amin'ny firenena samy hafa ary isaky ny vonona ny hanova ny mpizara fanovana ianao hahafahanao miditra ary manala tsotra fotsiny amin'ny iray ary mampihetsika. izany amin'ny hafa.
Ka tsy dia tsotra loatra toy ny fampiasana fampiharana VPN izay ahafahanao mifamadika haingana sy mora be ny mpizara. Tokony hiditra ao amin'ny backend router ianao. Ary raha tsy disable ianao, ity router ity dia hitazona fifandraisana amin'ny VPN amin'ny fotoana rehetra, izay mety tadiavinao, fa raha tsy izany dia mila miditra ianao mba hanafoanana izany toe-javatra VPN izany.
Andao horesahintsika izao ny zava-mitranga rehefa miditra amin'ny backend an'ny router ianao ary mahita fa tsy manana fampiasa VPN izy io. Efa nitady an'io vakizoro VPN na toerana io ianao raha te hanampy mombamomba anao miaraka amin'ny fikirana VPN ary tsy eo izany. Ity no tranga misy amin'ireo mpamily tranainy kokoa ary raha izany no izy dia mbola misy zavatra vitsivitsy azonao atao dia ny mampirehitra ny router.
Ny flashing router dia manova ny rafitry ny fiasan'ny efa tafiditra ao anaty boaty ho toy ny Tomatoor DDW-RT, izay hasehoko anao vetivety, koa mankanesa ao amin'ny tranonkalany ary kitiho ny Downloads. Azonao atao ny mitady ny router-nao manokana hahitana raha manohana io router io izy io. Ary ho hitanao fa manohana ahy ny router.
Ka tsindrio eo izany ary ampidino ny rakitra izay mifandray amin'ilay router manokana. Raha vantany vao azoko io fampirimana na fisie io ao amin'ny folder fampidinana ahy dia miverina amin'ny router aho. Mitady izay mety fantatra amin'ny hoe fitantanana, fanavaozana ny firmware ianao, ary avy eo te-hampakatra ilay rakitra vao avy nosintominao tamin'ny DDW-RT na Tomato na inona.
Ankehitriny te-hanome fampitandremana haingana aho, tsy hataoko izao satria tiako manokana ny Asus backend misy ahy ary manana fampiasa VPN izy io ka tsy misy antony tokony hanovako ny rafitra miasa. Mety ho zavatra maharary izany. Mety hanakorontana ny raharaha.
Ka raha tsy fantatrao izay ataonao, na azonao antoka ny zavatra ataonao, na tsy miraharaha ny fanakorontanana tsy nahy ny router-nao ianao, dia hitandrina aho amin'ny fanaovana io zotra io sy ny fanapahana ny router. Tahaka ny nolazaiko, ny iray amin'ireo safidy hafa azonao atao dia ny azonao atao ny mividy router efa namboarina tamin'ny alàlan'ny fandehanana any amin'ny Allthingssecured.com/flashrouters.
Ary hoentina any amin'ny tranonkala iray ianao izay manome safidy maro isan-karazany ho an'ny router, tsy vitan'ny hoe misy marika isan-karazany araka ny hitanao eto, fa samy hafa koa ny mpamatsy VPN. Azonao atao ny mividy ny karazana router tadiavinao amin'ny teti-bola isan-karazany ary avy eo dia efa nopotserina sy natolotra mivantana any an-tranonao efa natsangana miaraka amin'ny mpamatsy VPN, noho izany safidy hafa azo isafidianana raha tsy manana ny router-nao Manana fampiasa VPN ary tsy azonao antoka tanteraka, na tsy vonona ianao na tsy afaka mampandeha ilay router manokana. OK, izao satria afaka mandeha ny router WiFi anao, ny ranomandry izay mifandray amin'ny alalàn'io router io dia mihoatra ny fampandehanana ny mpizara VPN.
Raha manana fanontaniana ianao dia avelao eto ambany ireo hevitra. Ary raha ilaina ity fampianarana ity dia tiako raha tsindrio ny bokotra ary hisoratra anarana amin'ny All Things Secured. Mijanona ho azo antoka.
Misy fomba fampifandraisana mandeha ho azy amin'ny VPN?
Misaotra tamin'ny hevitrao. Ny lohatenin'ity fanontaniana ity dia milaza fa ny mpampiasa dia manandrana mampifandray mandeha ho azy amin'ny fifandraisana 'VPN' fa tsy wifi na fifandraisana Internet miorina amin'ny LAN. Ny olana dia ny fifandraisana VPN dia tsy manana an'io safidy io. Nahasoa ve ity valiny ity?
Ahoana ny fomba hanaovana fifandraisana VPN amin'ny PowerShell?
Ao amin'ny varavarankely PowerShell, kitiho ireto manaraka ireto ary soloo ny & lt; VPNConnection & gt; ary & lt; AppPath & gt; miaraka amin'ny anaran'ny fifandraisana VPN, ary ny làlan'ny rakitra mankany amin'ilay rindranasa tianao hampiasaina tsirairay avy: Hamarino tsara fa ampidiro ao anaty baiko ireo marika nalaina. Tsindrio Enter raha hampandeha ny baiko.
Aiza no hitehirizako ny teny miafiko mba hifandray amin'ny VPN indray?
Mba hametrahana ny fifandraisana indray mandeha ho azy VPN, ny anaran'ny mpampiasa sy ny teny miafinao dia tsy maintsy tehirizina ao amin'ny Windows Credential Manager. Ity fihetsika ity dia voafaritra mandritra ny fametrahana azy: Raha voamarina ny safidy 'Tadidio ny mari-pahatokisako' dia hamonjy ny anaran'ny mpampiasa sy ny teny miafina i Windows aorian'ny fifandraisana voalohany amin'ny VPN. Mifandray indray amin'ny Task scheduler
Ahoana no fomba hananganana VPN amin'ny Windows 10?
Aorian'ny fametrahana ny fifandraisana VPN amin'ny Windows 10 dia mila manokatra ohatra avo lenta an'ny PowerShell ianao. Mba hanaovana izany dia kitiho ny bokotra Start ary kitiho ny 'Powershell.' Tsindrio havanana ny 'Windows PowerShell,' ary avy eo safidio ny 'Run as Administrator' avy amin'ny menio. Tsindrio 'Eny' amin'ny tsindry izay toa mamela ny fidirana amin'ny solosainao.